सुन्दर अनुहारमा डण्डीफोर आउन बाट कसरि बच्ने? | Glamour Nepal
सुन्दर अनुहारमा डण्डीफोर आउन बाट कसरि बच्ने?
मंसिर २, २०७२
धेरै युवायुवती डन्डीफोरको समस्याले पीडित हुने गरेका छन्। डन्डीफोर छालामा हुने एक प्रकारको रोग हो भन्ने कुरा नबुझ्दा र डन्डीफोर निको पार्ने भन्दै विभिन्न घरेलु उपाय अपनाउँदा धेरैले अनुहारको सुन्दरता गुमाउँछन्।
मानिसको शरीरमा हुने रौँको फेदमा स–साना प्वाल हुन्छन्। रौँको जरामा जोडिएर बसेको एक प्रकारको ग्ल्यान्ड हुन्छ। यो ग्ल्यान्डले छालालाई चिल्लो बनाउने विशेष प्रकारको रस उत्पादन गर्छ। जुन बेला रौँको जरामा रहेको प्वाल बन्द हुन्छ, त्यस्तो बेलामा छालालाई चिल्लो बनाउने रस बाहिर निस्कन पाउँदैन। यो छालाभित्रै जम्छ। यसरी जमेको अवस्था नै डन्डीफोर अर्थात् पिम्पल्सको अवस्था हो।
डन्डीफोरका चारवटा तह हुन्छन्। स्वास्थ्य विज्ञानले ग्रेड एकदेखि चारसम्म यसको वर्गीकरण गरेको छ। डन्डीफोरको पहिलो चरण ‘ब्ल्याक हेड’ हो। काला स–साना गिर्खा अनुहारमा भएको अवस्थालाई नै ब्ल्याक हेड मानिन्छ। चौथो चरणमा पुगेको डन्डीफोरमा पीप र रगत नै जमेको हुन्छ।
डन्डीफोर आइसकेपछि त्यसमा ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन हुने भएकाले यसले छालालाई थप हानि पु¥याउँछ। अनुहार, छाती, कुम र कहिलेकाहीँ ढाडमा पनि डन्डीफोर आउँछन्। कपडाले ढाक्ने भागमा डन्डीफोर आउँदा खासै फरक पर्दैन। तर, अनुहारमा डन्डीफोरले दाग, धब्बा र स–साना खोपिल्टा छोडेर जाने भएकाले यो धेरैको पिरलो बन्ने गरेको छ।
डन्डीफोर बाट यसरी बच्न सकिन्छ:
डन्डीफोर धेरै चिल्लो छालामा देखिने रोग हो। यसबाट जोगिन छालालाई ड्राई राख्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ। धेरै चिल्लो खानु हुँदैन। चकलेट धेरै खानेहरूलाई पनि डन्डीफोरको समस्या देखिन सक्छ। डन्डीफोर आएकाले तेलबाट जोगिनुपर्छ। कपालमा तेल हालेर बस्ने गर्नु हुँदैन। अनुहारको चिल्लो हटाउन क्लिन्जिङ गर्नुपर्छ। दिनमा तीनचारपटक मुख धुनुपर्छ। छालालाई सुक्खा बनाउने क्रिम लगाउनुपर्छ। डन्डीफोरले निकै नै दुःख दिएको छ भने एन्टिबायोटिक क्रिम लगाउने र औषधि खानुपर्ने पनि हुन्छ।
डन्डीफोरले बिगारिसकेको अनुहारको छालालाई सफा बनाउन औषधि र क्रिमले मात्र काम गर्दैनन्। यसका लागि लेजर थेरापी गर्नुपर्छ। डन्डीफोरका कारण दाग बसेको छालालाई मेसिनको सहायताबाट हटाउने विधि प्रयोग गरी उपचार गर्नुपर्छ। यो विधिमा दाग बसेको छालाको बाहिरी तहलाई हटाउने र नयाँ छाला पलाउने अवस्था सिर्जना गरिन्छ। यसो गर्दा समेत अनुहारको शतप्रतिशत दाग भने जाँदैन। केही कम गर्न सकिन्छ। डन्डीफोर आउन थालेपछि त्यसलाई कोट्याउने तथा निचोर्ने नगरी विशेषज्ञ चिकित्सकलाई देखाएर थोरै सावधानी अपनाउँदा अनुहारमा आउने समस्याबाट बच्न सकिन्छ।
Beauty Face Skin Care Skin Care Tips
नायिका सुरविना कार्कीको फ्लप ह्याट्रिक!
करिश्माको “फागु” मा शिल्पा सँग नव नायक सुबाश पराजुलीको ढ्यांन-टरयान
गर्मीयाम हरेक व्यक्तिको मनपर्ने मौसम नहुन पनि सक्छ। गर्मी महिनाको समयमा सूर्यको कडा किरणका कारण छालालाई नरम र चमकदार बनाई राख्न निकै गाह्रो हुने गर्छ। धुलो र धुवाले झनै अनुहारलाई झनै विगार्ने गर्छ। गर्मीमा तपाईको त्वचालाई कसरी चमकदार र नरम बनाउन सकिन्छ? यी ५ तरिका अपनाउनाले तपाईको सुन्दरमुहारको सुदरतामा कमि आउने छैन।
ग्रिन टी तौल कम गर्न, उमेर बढाउन तथा तनाव कम गर्न उपयोगी मानिन्छ, तर छाला र केशका लागि पनि यसले विशेष काम गर्छ। ग्रिन टीमा अनेकौं विविधता पाइन्छ। यसमा एप्पल ग्रिन टी विशेष...
जाडोयामको सुरुवातसँग चिसो बढ्दै छ। चिसोको कारण हामीलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्या पनि देखिन्छ। त्यसमध्ये छाला सुख्खा हुने समस्या पनि एक हो। चिसो मौसमका हावा एकदमै...
उमेर ३० नाघ्यो? अझ राम्री देखीन यसरी गर्नुहोस् स्किन केयर
बढ्दो उमेरसँगै छालामा रिंकल्स, धब्बा, दाग, आँखाको वरिपरि कालो घेरालगायतका समस्या देखिन थाल्छन्। त्यसैले यो उमेरमा छालाको सुरक्षा गर्न निकै आवश्यक छ। ३० वर्षपछि पनि...
जाडो मौसममा आफ्नो सुन्दरता चम्काउन यसरी गर्नुहोस मेकअप
जाडो मौसम छ। पार्टीमा जानुपर्ने पनि यही वेला बढी हुन्छ। तर, चिसोले छालालाई बढी सताउने पनि यही वेला गर्छ। यस्तो अवस्थामा अधिकांश तनावमा हुन्छन्। तर, तनाव लिनुभन्दा...
डन्डीफोर, कालो धब्बा हटाउंदै अनुहार चम्किलो र मुलायम बनाउने २० घरेलु तरिकाहरु
दुई चम्चा जौको धूलोमा कागतीको रस मिसाई पेस्ट बनाएर दाग भएको ठाउँमा लगाउने गर्नुपर्छ। कागतीको रसमा ब्लिचिङ गुण हुन्छ। यसले कालो धब्बा हटाउन मद्दत गर्छ। यसका लागि...
Tik Tok Model Garima Sharma Graces The Cover of…
जाडो मौसममा आफ्नो सुन्दरता चम्काउन यसरी गर्नुहोस...
डन्डीफोरबाट छुटकारा पाउन सकिने घरेलु उपायहरु
जष्टिन बिबर जस्तै देखिने यौन खेलौना